Sahan - Codadka Shaqaalaha Galmada VIC
You are here: Bogga ugu weyn / Survey
Ku saabsan sahamintan
Dowladda Fiktooriya waxay qabaneysaa Dib u eegis lagu sameynayo shaqada galmada. Kala-sooca micnaheedu waa in shaqada galmada lagu habeyn doono sida ganacsiyada kale ee caadiga ah. Laakiin ma jiro hal wado oo tan lagu sameeyo. Shaqaalaha galmada waxay u baahan yihiin inay aqoonsadaan qawaaniinta ay u maleynayaan inay ku habboon yihiin iyo waxa dowladda ay tahay inay wax ka qabato si shaqada galmada ay u noqoto mid hagaagsan oo aamin ah.
Sahankan waxaa loogu talagalay shaqaalaha hadda jira iyo kuwii hore ee galmada ee ka shaqeeyey Fiktooriya. Waxaa soo uruurin doona Xarunta Caafimaadka Bulshada iyo Xuquuqda Aadanaha ee Michael Kirby (qayb ka mid ah Jaamacadda Monash) fikradaha aad dhiibtidna waxaa loo adeegsan doonaa in lagu ogeysiiyo soo gudbinta Michael Kirby Centre ee dib-u-eegida Shaqada Jinsiga ee Victoria.
Waxaan ku qiyaasnay ​​in sahanka uu qaadan doono ku dhawaad ​​10 daqiiqo in la dhammaystiro.
Soo gudbinta sahanka ayaa xirmi doonta Luulyo 15keeda markay tahay 11:50 PM.